जनजाति महासंघका महासचिव भन्छन्, ‘आङकाजी प्रवृत्ति’ले जनजाति आन्दोलन अप्ठेरोमा – Tharuwan.com
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले आङकाजी शेर्पा प्रवृत्तिका कारण नेपालको जनजाति आन्दोलन अप्ठेरोमा परेको बताएका छन् । आङकाजी प्रवृत्तिकै कारण जनजाति आन्दोलन कमजोर बनेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिमको विकट हिमाली जिल्ला बाजुराको अल्पसंख्यक भोटे समुदायबाट राजनीतिमा सामेल हुने पेम्बा गुरुङ भोटे अहिले सभासद समेत छन् । एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा पढ्न आएका पेम्बा वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्दागर्दै जातीय मुक्तिको बाटो हिँड्न थाले । ठाकुर गैरे अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा पेम्बा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसपछि उनी आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिव निर्वाचित भए । पेम्बालाई हालै नेकपा एमालेले छुटेको अल्पसंख्यक आदिवासीको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदबाट सभासद मनोनित गर्‍यो ।
पछिल्लो समय महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले वर्तमान महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेमाथि ‘जनजाति विरोधी र एमालेको भरौटे’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत तीब्र विरोधको अभियाननै चलाइरहेका छन् । हालै बुटवलमा सम्पन्न महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलामा पेम्बामाथि आङकाजी पक्षधरले हातपातको प्रयास समेत गरे ।
सोही भेलाले पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनमा महासंघ सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि महासंघको वर्तमान नेतृत्व र पूर्व नेताहरुबीच वाकयुद्ध चलिरहेको छ ।
तपाईमाथि बुटवलको जनजाति भेलामा आक्रमण भयो नि होइन ?
ममाथि आक्रमण किन भयो भन्ने अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । हामीले निम्ता नदिए पनि निवर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पा बुटवल पुग्नुभएछ । उहाँ पुगेपछि हामीले मञ्चमा आसन ग्रहण गरायौं, भाषण पनि गर्न दियौं । उहाँले मञ्चमा उभिएपछि महासंघ विरुद्ध, हाम्राविरुद्ध मनपरि बोल्नुभयो ।
आमन्त्रित मान्छेले आयोजक जस्तै बनेर महासंघ पद्मरत्न नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी हुन्छ भन्न थाल्नुभयो । उहाँले बोलेपछि मैले यो विषय बन्दसत्रमा छलफल हुन्छ भनेपछि नियोजित रुपमा दुई चारजना मान्छे ममाथि आक्रमणमा उत्रिए ।
अनि तपाईले आङकाजी शेर्पाको आम्दानीको स्रोत भएको भन्दै विदेशका शाखालाई भेलामा सहभागी हुन दिनु भएन रे नि त ?
आङकाजी शेर्पासँगै बेल्जियम शाखाको अध्यक्ष पीजी शेर्पा पनि जानु भएको रहेछ । उहाँ संघीय समाजवादी पार्टीको नेता पनि हो । त्यो भेला जिल्ला अध्यक्षहरुको मात्र थियो । मैले उहाँलाई प्रवास शाखाका अध्यक्षहरुको भेलामा बोल्न दिइन्छ भनेको हो ।
तपाई, तपाईका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार लेखीलाई बाहुनक्षेत्रीको पक्षमा लागेको आरोप पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भइरहेको छ नि ?
हाम्रो पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पा र उहाँका केही मान्छेले यस्तो गरिरहेको भन्ने हामीले बुझेका छौं । तर, उहाँहरुले हामीलाई जे आरोप लगाइरहनुभएको छ, आफ्नो अनुहार एकपटक हेर्न आग्रह गर्छु । वास्तवमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा आङकाजी शेर्पा प्रवृति एउटा नकारात्मक प्रवृत्ति हो, जसले हाम्रो पहिचानको आन्दोलनलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । फेसबुक र सोसल मिडियामा उट्पट्याङ लेख्दैमा र ठाउँ कुठाउँ उट्पट्याङ हर्कत गरेर हिँड्दैमा आदिवासीको अधिकार स्थापित हुँदैन ।
अर्को कुरा, बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गरेर हाम्रो आन्दोलन सफल हुँदैन । म वर्गीय विभेद हटाउन राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ । पछि बुझ्दै जाँदा वर्गीमात्र होइन, जातीय विभेद पनि रहेछ भन्ने देखेर जातीय मुक्तिको आन्दोलनमा हिडेको हुँ । यस्ता कमजोर मानसिकताका व्यक्तिहरुको आरोपबाट बिचलित हुन्न ।
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न एकजुट हुने बेलामा तपाईहरु त फुट्नुभयो होइन ?
हामी फुटेका होइनौं, जनजाति महासंघको छाताबाट केही हाम्रा पूर्वजहरुले षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अलग हुन खोज्नुभयो र गल्ली गल्लीमा विभिन्न मोर्चा खोल्दै महासंघलाई कमजोर बनाउने प्रयास भयो । तर, महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाले एकमतले निर्णय गरेर नया संविधानमा आदिवासीका सबै अधिकार स्थापित गर्न महासंघकै नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
त्यसअघि हामीले संघीय परिषद सचिवालय र ५६ ओटा जातीय संगठनहरुको भेलामार्फत पनि म्यान्डेट लिइसकेका छौं ।
पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहभागी नहुने निर्णय चाहिँ किन गर्नुपर्‍यो त ?
यसबारेमा केही भ्रम छन्, त्यसलाई तोड्न चाहान्छु । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको २४ वर्षको इतिहासमा महासंघ कुनै पनि संगठन वा मोर्चाको नेतृत्वमा एउटा घटकका रुपमा सहभागी भएको छैन र हुन पनि सक्दैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, महासंघका केही पूर्वनेताहरुले महासंघलाई कमजोर बनाउने र सिध्याउने खेल लामो समयदेखि खेल्दै आउनुभयो । उहाँहरुले पछिल्लो समय पद्मरत्न तुलाधरलाई खडा गर्नुभयो । तर, महासंघ व्यक्तिको पछि लाग्न सक्दैन ।
दोस्रो कुरा महासंघ भनेको आफैंको विशाल संगठन हो । यसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै दलमा आवद्ध जनजातिहरु छन् । गाउँदेखि प्रवाससम्म संगठन छ । यस हिसाबले जनजाति महासंघ भनेको तीन दलभन्दा पनि ठूलो संगठन हो । हामीले चाहेको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलन पनि हाम्रो नेतृत्वमा उठाउन सक्छौं, कुनै व्यक्तिलाई गुरु थाप्न जानु पर्दैन ।
तेस्रो कुरा चाहिँ महासंघ सबैको साझा हो, यसमा कांग्रेस एमालेका मान्छेहरु पनि छन् । तर उहाँहरुले गठन गरेको राष्ट्रि आन्दोलन समिति भनेको एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय गठबन्धनको एउटा जातीय घटकमात्र हो । आज महासंघ एउटा दलको मोर्चामा घटक भएर जाने हो भने भोलि कांग्रेस एमाले लगायत अन्य दलका जनजातिले अर्को मोर्चा बनाउलान्, महासंघ कता लाग्ने ? त्यसैले महासंघको नेतृत्वमा सबै आउनुपर्छ भनेको हो ।
अनि तपाईका अध्यक्ष र पद्मरत्न तुलाधरले संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरेर संयुक्त रुपमा जाने भनेको होइन ?
हामी पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आन्दोलन समितिसँग पनि सहकार्य गर्न लचिलो थियौं । तर, त्यहाँभित्र रहेका महासंघका पूर्वनेता सुरेश आलेमगरदेखि आङकाजी शेर्पासम्मका व्यक्तिहरुको संकीर्ण व्यवहार र शैलीले गर्दा आम आदिवासी जनजाति त्यसमा जान नसक्ने भए ।
उहाँहरु आफू हुन्जेल महासंघ ठीक, आफू नरहेपछि महासंघ सिध्याउने भनेर लाग्नुभयो । उहाँहरु एमालेभित्रका जनजाति नेताहरुलाई जनजाति नै नमान्ने, कांग्रेसका जनजातिलाई जनजाति नै नभन्ने जस्तो अति संकीर्ण चिन्तन बोक्नुहुन्छ । एमालेमा रहेर पहिचानको पक्षमा लड्ने जनजातिहरुलाई छि-छि र दूर-दूर गर्ने अनि माओवादी, संघीय समाजवादीमा रहेका पहिचान बिरोधीलाई पनि अँगालो हाल्ने तरिकासँग त महासंघ सहमत हुन सक्दैन । महासंघसबैको छाता संगठन हो ।
तपाईलाई एमालेले दिएको सभासद छाड्ने कि जनजातिले दिएको महासंघको महासचिव छाड्ने भन्ने चुनौति आइरहेको छ, कुन छाड्नुहुन्छ छाड्नै पर्दा ?
म अहिले जुन पदमा छु, कसैले दयामायाले दिएको पद होइन । म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशनबाट दुई तिहाई बहुमतले निर्वाचित भएको महासचिव हुँ । जसले यस्तो कुरा उठाएका छन्, तिनीहरु आदिवासी जनजातिको मत पाउन नसकेर पराजीत भएकाहरु हुन् । मैले आदिवासी जनजातिको विपक्षमा के अपराध गरेको छु र मैले राजीनामा दिने ?
जहाँसम्म सभासदको कुरा छ, सभासद पनि मलाई तिनीहरुले दयामायाले दिएका होइनन् । मलाई मेरो पार्टीले नेपालका अन्तरिम संविधान अनुसार छुटेका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको तर्फबाट आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट बनाएको हो । म आवश्यकता आधारमा सभासद बनाइएको व्यक्ति हुँ, आदिवासी जनजातिको पक्षमा संविधान बनाउन गएको हुँ, त्यसबाट बिचलित हुने कुरा छैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष र महासचिवमध्ये राजकुमार लेखी बाहेक अरु सबै पद्मरत्न तुलाधरको मोर्चामा आउ भनेर तपाईहरुलाई दबाव दिइरहेका छन्, यस हिसाबले त जनजाति आन्दोलनको मूलाधार त उनीहरु भए नि होइन र ?
अहिले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्, माधवकुमार नेपालले भनेको कुरा मलधार हुँदैन । को व्यक्ति कता लाग्यो भन्ने कुराको खासै अर्थ हुदैन । मुख्य कुरा संस्था हो । समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी महासंघको काँधमा छ । हामी हाम्रा अग्रजहरुलाई पनि आग्रह गर्छौं । तर, महासंघलाई कमजोर बनाउने र कुनै दलको मोर्चामा सहभागी हुने कुरामा महासंघ सहमत हुन्न ।
महासंघको राष्ट्रिय भेलामा पनि ४६ जिल्लाका अध्यक्षले त पद्मरत्न नेतृत्वको आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए रे त ?
त्यो वक्तव्य जुन आङकाजी शेर्पाले बाहिर लैजानुभयो, सरासर झूठो हो । महासंघका कुनै पनि जिल्ला अध्यक्षले त्यसो भन्नुभएको छैन । केही साथीहरुलाई अर्कै प्रयोजनका लागि भनेर कागजमा सही गराएको भन्ने पनि सुनियो ।
मात्रिका पौडेल/अनलाइनखबर साभार
One thought on “जनजाति महासंघका महासचिव भन्छन्, ‘आङकाजी प्रवृत्ति’ले जनजाति आन्दोलन अप्ठेरोमा”
महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेको अन्तर्वाता थारुवान डटकम मा पढ्न पाए, दु:ख लाग्यो, आदिवासी जनजाती आदोलन्लाई कसरी नयाँ शिरा बाट लैजाने बाटो देखाउन न सक्ने ? तर ब्यक्ती बिशेषको कुरालाई प्रधान बनाएर आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौच गरेर कसैको भलो र हित हुँदैन पेम्बा जि, जस्ले तपाईंलाई संबिधान सभामा पुर्यायो आज विर्शिदै हुनुहुन्छ, हिजका दिनमा आदिवासी जनजाती सभासद ककस बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको महासंघ तर तपाईंले नै इन्द्रेणी कम्पेक्समा ककस बनाउन खोज्दा यस्को औचित्यता माथि प्रश्न उठाउदै अभिब्यक्तिले अबरोध पुर्‍याउनु भाको नबिर्सनुस, तपाईंको तर्क कती केटौले हो आँकाजी प्रविर्तिले कसरी आन्दोलन कमजोर बनाउछ ? उनमा त्यस्तो के स्वार्थ छ र आन्दोलन कमजोर पार्ने ? हाम्लाई लाग्दैन यस्का बिरुद्धमा कोही पनि लाग्न सक्दैनौ । यसरी होइन हामी सबै मिलेर अधिकारका लागि लडौ ।